September 2021 – Page 21 – MC Tv Club
Unicode: ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU က အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သော မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့်မဆို လက်တွဲ၍ အာဏာရှင် စနစ် အားလုံးကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ KNU က ၎င်း၏ သဘောထားကြေညာချက် ၃ ရပ်ကို စက်တင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး …
NUGကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကိုရီးယားလွှတ်တော်အမတ် အီယုန်ဆွန်း တွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်နိုင်ထွန်းသည် လက်ရှိ အာဏာရပါတီ၏ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှူး လွှတ်တော်အမတ်မစ္စတာအီယုန်ဆွန်း(လွှတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် တောင်မြောက်ပေါင်းစည်းရေး ကော်မတီဝင်)နှင့်ဘကိုရီးယားပြည်သူ့ လွှတ်တော်တွင် တွေ့ဆုံ၍ NUGအစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လွှာအား ပေးအပ်ကာ မြန်မာ့အရေးကိစ္စများအား နွေးထွေး ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်နိုင်ထွန်းမှ သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းကို ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ …
ကိုဗစ်ရောဂါခံစားနေရတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုစောက်ရှောက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ရှင်မွေလ….
“တကယ်တော့ Covid ဆိုတာ တကယ်ကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ရောဂါပါ ကျွန်တော့်အဖေရော အမေရော ရောဂါအတူတူ ဖြစ်တယ် .. အမေက သွေးတိုးနှလုံးရှိလို့ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းက စပြီးခံရတယ် .. အမေဖျားတဲ့အချိန် အဖေက အေးဆေးပဲ … ပြီးတော့9ရက်မြောက်လဲရောက်ရော အမေက သက်သာသွားတယ် .. အဲ့အချိန်ထိ အဖေက အေးဆေးပဲ … 11 …
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း စစ်တပ်ကို ဘဏ္ဍာငွေကြေးအရထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအပေါ် ပစ်မှတ်ထား အရေးယူတဲ့ ပိတ်ဆို့ ဒဏ်ခတ်မှုအသစ်တွေထပ်မံ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဒီကနေ့ ကြေညာချက်လိုက်ပါတယ်။ ထူးကုမ္ပဏီနဲ့ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်သူ ဦးတေဇရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေး၀န်ကြီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း စစ်တပ်ကကျူးခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာရှင်းလင်းရေးအစီအစဉ်တွေမှာ အသုံးပြုဖို့ လက်နက်ပွဲစားတဦးအနေနဲ့ ဦးတေဇက ၀ယ်ယူပေးခဲ့တယ်လို့လည်း ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ …
မြန်မာ့အရေးကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည့် ပြည်သူ ၃ သန်းဆီ ကုလ အကူအညီပေးသွားမည်
မြန်မာ့အရေးကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည့် ပြည်သူ ၃ သန်းဆီ ကုလ အကူအညီပေးသွားမည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသောပဋိပက္ခများနှင့်နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌မလုံခြုံမှုများကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာရိုက်ခတ်မှုရှိလာမည်ကိုကုလသမဂ္ဂက စိုးရိမ်ကြောင်း၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်ကတည်းကလူ ၂၀၀၀၀၀ ခန့်မှာနေရပ်စွန့်ခွာခဲ့ရပြီး အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ၊ပြည်သူ ၃ သန်းဆီ အကူအညီပေးသွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ ပြောခွင့်ရသူFlorencia Soto Nino က ကုလသမဂ္ဂ ရုံး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။ Zawgyi/ မြန်မာ့အရေးကြောင့် အိုးမဲ့အိမ့်မဲ့ခဲ့ရတဲ့ …
တရုတ်အစိုးရ၏ အာရှရေးရာကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံကို တိတ်တဆိတ်လာရောက်ခဲ့
တရုတ်အစိုးရရဲ့ အာရှရေးရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ဆွန်ကော့ရှန်ဟာ ဩဂုတ်လနှောင်းပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်ခဲ့ပြီး ဒီသတင်းကို အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဖက်က လျှို့၀ှက်ထားခဲ့ပါသည်။ ဩဂုတ်လ ၂၁ ရက်နေ့ကနေ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ၈ ရက်တာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ ဆွန်ကော့ရှန်ရဲ့ခရီးမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် အပါအဝင် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ မြောက်ပိုင်းက ကိုးကန့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ MNDAA …
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေကို နိုင်ငံတကာသိအောင်ရိုက်ကူးတင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ စင်ကာပူအခြေစိုက် Channel NewsAsia (CNA ) ရဲ့ မြန်မာဗျူရိုက VJ သတင်းထောက် (၂) ဦးကို Hinzpeter သတင်းထောက်ဆုပေးအပ်ဖို့ရွေးချယ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ Hinzpeter ဆု ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဆုရရှိသူ (၂) ဦးရဲ့အမည်ကိုတော့ လုံခြုံရေးအရ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲ CNA ရုံးချုပ်ကတဆင့် ဆက်သွယ်အသိပေးမယ်ဆိုပါတယ်။ …
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို အိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်း
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို အိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်း…. “ညကအူဝဲကိုအိမ်မက်မက်တယ်။မြန်မာဝတ်စုံဝမ်းဆက်လေးနွမ်းနွမ်းလေးဝတ်ထားတယ်။အသားတွေလဲညိုသွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုတွေတော့ဖက်ပြီးငိုလိုက်တာလေ။ကိုယ်ကလဲဖက်ပြီးငိုသားအမိနှစ်ယောက်ဖက်ပြီးငိုလိုက်ကြတာလေ။ကျမသမီးလေးကျန်းမာချမ်းသာပြီးအန္တရယ်ကင်းဘေးရှင်းပါစေ။ အချုပ်အနှောင်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ” လို့ ခင်စန်းဝင်းက အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို သတိရခြင်းများစွာဖြင့်အိမ်မက် မက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို ရေးသားထားပါတယ်။ Zawgyi/ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို အိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ်ခင်စန်းဝင်း…. “ညကအူဝဲကိုအိမ်မက်မက်တယ်။မြန်မာဝတ်စုံဝမ်းဆက်လေးနွမ်းနွမ်းလေးဝတ်ထားတယ်။အသားတွေလဲညိုသွားတယ်။ ကိုယ့်ကိုတွေတော့ဖက်ပြီးငိုလိုက်တာလေ။ကိုယ်ကလဲဖက်ပြီးငိုသားအမိနှစ်ယောက်ဖက်ပြီးငိုလိုက်ကြတာလေ။ကျမသမီးလေးကျန်းမာချမ်းသာပြီးအန္တရယ်ကင်းဘေးရှင်းပါစေ။ အချုပ်အနှောင်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ” လို့ ခင်စန်းဝင်းက အိန္ဒြာကျော်ဇင်ကို သတိရခြင်းများစွာဖြင့်အိမ်မက် မက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အာဆီယံ အထူးသံတမန်တို့ တွေ့ဆုံခွင့်ရရေး တရုတ်အစိုးရတိုက်တွန်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အာဆီယံ အထူးသံတမန်တို့ တွေ့ဆုံခွင့်ရရေး တရုတ်အစိုးရတိုက်တွန်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ချိန်တွင် စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်များ အပါအဝင် ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်လည်း တွေ့ခွင့်ရရေး မျှော်လင့်နေကြောင်း သိရသည်။ အာဆီယံ အထူးသံတမန် Erywan Yusof သည် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မခန့်အပ်ရသေးခင် ဇွန်လဆန်းပိုင်းကလည်းမြန် မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ …
NUG ယာယီ သမ္မတကြီး နှင့် တောင်ကီုးရီယား သမ္မတ တို့အတူ မြန်မာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမည်
NUG ယာယီ သမ္မတကြီး နှင့် တောင်ကီုးရီယား သမ္မတ တို့အတူ မြန်မာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကြိုးပမ်းသွားမည် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)၏ ယာယီသမ္မတကြီး ဒူဝါလရှီးလမှတောင်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သမ္မတကြီး မွန်းဂျဲအင်ထံ ပြည်သူ့အစိုးရ NUGနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်ပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရသမ္မတရုံးက ပြန်ကြားစာပေးပို့ခဲ့သည့်အပေါ်ကျေးဇူးတင်သဝဏ်လွှာအား ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။ Zawgyi/ NUG ယာယီ သမ္မတကြီး နှင့် တောင်ကီုးရီယား သမ္မတ တို့အတူ မြန်မာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးကြိုးမ်းသွားမည် …